ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၄-၆-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၄-၆-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း စစ်ရေး တင်းမာ click
- KIO ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဖွဲ့ ဖွဲ့မယ် click
- ထိုင်းရေထွက်ပစ္စည်းစက်ရုံ မြန်မာအလုပ်သမား ၂,၀၀၀ ဆန္ဒပြ click
- မြန်မာ ဝမ်ပေါင်ကုမ္မဏီတာဝန်ခံ ဖြေရှင်းချက် - အပိုင်း (၄) click
- ကွယ်လွန်သူ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနု ၁၀၆ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ကျင်းပ click
- နေရှင်း ဦးလောရုံ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ထုတ်ဝေ click
- ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အာဏာသက်ရောက်မှုရှိရေး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဆွေးနွေး click
- ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ပါဝင်တဲ့ ညီလာခံ ကျင်းပနိုင်ရေး ဆွေးနွေး click
- ၈၈ ညီလာခံ ၈၈ မျိုးဆက်များ တက်ရောက်မည် click
- အပြောလွယ် အလုပ်ခက်လား … (ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ) click
- ဦးဝီရသူဓာတ်ပုံပါတဲ့ Times မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးအကြောင်း (တနင်္ဂနွေ စကားဝိုင်း) click
- ထောင်ချောက် (ဆောင်းပါး) click
- မြန်မာအင်ပါယာ (ဆောင်းပါး) click
- အင်တာနက် တိုးတက်မှုနဲ့ အနှုတ်လက္ခဏာ - အပိုင်း (၄) click
- ကယန်း (ပဒေါင်) လူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့စရိုက် (ဆောင်းပါး) click
- ကုသိုလ်တော်ကျောက်စာ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှု မှတ်တမ်းဝင် click
- ၀င်းဖေလွယ်အိတ် - ၂၄၈ (အသံ) click
- လင်းလက်ကြယ်စင် - ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး (အသံ) click
- “လူမျိုး၊ ဘာသာတွေ” မခွဲခြား၊ “အမ” ဖြစ်လို့ကတော့ လာထားပဲတဲ့ … ဟိတ် … (ကာတွန်း) click
- ကိုယ်ကောင်းရင် ခေါင်းဘယ်မှ မရွေ့ဘူး ဟိတ် … (ကာတွန်း) click
- နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလား အသည်းအသန် ဖြစ် click
- တောင်အာဖရိက သမ္မတဟောင်း မန်ဒဲလား ကျန်းမာရေး စိုးရိမ်ရ click
- Snowden ဟောင်ကောင်ကနေ ထွက်ခွာ click
- ကန်ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း ရုရှား ရောက်ပြီ click
- Snowden အီကွေဒေါမှာ ခိုလှုံခွင့်လျှောက် click
- အမေရိကန်အကြောင်း ဖွင့်ချဖော်ထုတ်သူ click
- ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ လူဝင်မှု ဆွေးနွေးဖို့ ၀န်ကြီးကယ်ရီ အိန္ဒိယ ရောက်ရှိ click
- ပါကစ္စတန်မှာ နိုင်ငံခြားခရီးသည်တွေ ပစ်သတ်ခံရ click
- မီးခိုးမြူကြောင့် မလေးရှား အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာ click
အစိုးရ ရဲ. ပြည်သူတွေအပေါ် ကောက်ကျစ်ယုတ်မာမှု
ကြောင်. တိုင်းပြည်ရဲ.အင်တာနက် မြန်နှုန်း နှေးကွေးမှုဖြစ်
... အင်တာနက်ဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံ မပြည်.စုံ
တာ ရှိသလို ၊
လူတွေ မသုံးသလောက် ဖြစ်တဲ. ည သန်းခေါင် ကနေ မနက်စောစော အထိ အချိန်တွေမှာ အင်တာနက် မြန်နှုန်း
ကောင်း မလာအောင် စေတနာ ဗလပွ နဲ. CONTROL လုပ်
ပြည်သူတွေအပေါ် ကောက်ကျစ်ယုတ်မာမှု အပြည်.နဲ.
အစိုးရ ပါ ။
တီတီချို ရေ အဲဒါတင်ဘယ်ကမလဲ ပြည်သူ ။ဝန်ထမ်း။NGO သူတိုလိုရင်
အသဲအသန်ပဲ မလိုရင် ဘာမှပြန်မကြည့်ဘူး။ အာလုံးအသုံးချခံ နေရတယ်။
တပဲသား အာဏာနဲ့ အာဏာပြချင်နေသေးတဲ့ လဒတွေ ရှိသေးတယ်။
ဆရာ ဆရာမတွေကိုတော့ ဘာမကောက်နဲ့ ညာမကောက်နဲ့ လစာထုတ်တာ
နဲ့ သိရှိကြောင်းထိုးရတယ် နမ္မတူမှာ ကျောင်းဝန်းထဲ လာစော်ကားတာကျ
တော့ ပွဲထဲက ဝံကြီး ဝံကလေးတွေ ဘယ်တွေရောက်နေလဲ?
စီမံခန့်ခွဲဖို့ အဆောင်အယောင်အနေနဲ့ ပေးထားတဲ့ သံလျှက် ကို စနစ်တကျ
မသုံးပဲ ဈေးထဲမှာ ငပိ ကော်ဖို့ သုံးတဲ့ အရာလို လုပ်နေကြတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ၂၀၁၅ ကို ဟေးလားဝါးလားနဲ့ ရောက်သွားဦးမယ်။
ဒီတခါ ဝန်ထမ်းတွေဆီက မလိမ့် တပတ်နဲ့ လုပ်ပြီး မဲ ယူဖို့ မကြံနှဲု့